Ku Hel Tababbarka Gacan Ku Qaadashada Aagga IT-ga oo leh Darajooyinka Kombuyuutarka »Hodges U
Categories: associate, Bachelor, Teknolojiyada Macluumaadka Kumbuyuutarka, Sayniska kombiyuutarka, Featured, Tilmaamaha internetka, Technology
Sayniska Kombiyuutarka iyo Darajooyinka Teknolojiyada Macluumaadka Kumbuyuutarka
Aynu Ku Bilawno Aasaaska… Ma waxaad Raadineysaa Shahaadada Sayniska Kombuyuutarka ama Shahaadada Teknolojiyada Macluumaadka Kumbuyuutarka? Jawaabta ayaa laga yaabi karaa.
Dadka badankood waxay ka fikiraan "sayniska kombiyuutarka" oo ah eray-ku-soo-qabashada oo dhan ee darajooyinka kombiyuutarka. Xaqiiqdu waxay tahay, labaduba inay ka sii duwanaan kari waayeen Shahaadada Sayniska Kombiyuutarka waxay baraneysaa "sayniska" kombiyuutarada halka shahaadada Teknolojiyada Macluumaadka Kumbuyuutarka iyo aasaaska ay kuu diyaarineyso inaad gacan-ka-qabato ka shaqeyso Warshadaha IT-ga.
Waxaan bixinaa shahaadooyin kombiyuutar leh takhasus gaar ah:
Teknolojiyada Macluumaadka Kumbuyuutarka is shahaado la beddeli karo oo loogu talagalay inay ardayda siiso shahaadooyin ay kaga shaqeeyaan qaybta guud ee IT-ga iyadoo ardayda loo oggolaanayo inay doortaan xulashooyinka ku habboon aqoontooda, xirfaddooda, iyo waayo-aragnimadooda - si gaar ah iyaga ugu qalma guusha.
Nabadgelyada internetka iyo isku xirnaanta waa shahaado siisa ardayda fursad ay si qoto dheer ugu dhex galaan amniga internetka iyo weerarada internetka adoo adeegsanaya tusaalayaal iyo aalado laga helo goobta shaqada si loo fahmo oo kaliya sida weerarada amniga u dhacaan, laakiin sida looga hortago.
Horumarinta Barnaamijka waxaa loogu talagalay ardayda xiiseyneysa barnaamijyada iyo koodh. Tani waa shahaado dhammaystiran oo loogu talagalay ardayda xiiseyneysa inay soo saaraan barnaamijyada SAAS, barnaamijyada la xiriira internetka (sida naqshadaha websaydhka ama qalabka elektarooniga ah), barnaamijyada ciyaaraha, ama barnaamijyada.
Jaamacadda Hodges, waxaan ku takhasusnay gacan-qabsiga dhinaca IT-ga adduunka si aan kuugu galino suuqa shaqada si dhakhso leh - oo leh xirfado sax ah iyo shahaadooyin takhasus gaar ah leh. (Eeg hoosta si aad u hesho macluumaad buuxa oo ku saabsan barnaamijyadeena shahaadada)
Kulliyadaha la awoodi karo: La-Xiriiriyaha Khadka Tooska ah ee Internetka ee Darajooyinka Teknolojiyada Macluumaadka
Xarunta Darajada Bachelor: 15 Bachelor-ka ugu Fiican ee Online-ka ee Naqshadeynta Sawirka ee 2020
Faallooyinka Kulliyadda ugu Fiican: Tilmaamaha Kulliyadaha Internetka ee Florida
Kulliyadaha ugu Fiican: Bachelor-ka ugu Fiican ee Barnaamijyada Barnaamijyada Kumbuyuutarka ee 2020
Tilmaamaha Kharashka Kuleejka: 2020 Kulliyadaha Sare ee Online-ka ah ee Florida
Aagga Kombiyuutarka: 20ka Bachelor-ka ee ugu Fiican Online-ka ee Teknolojiyada Macluumaadka 2016-2017
Baro.org: Bachelor-ka Khadka Tooska ah ee Tiknoolajiyadda Macluumaadka (IT)
Qiimaha Koolejka Weyn: 20 Qiimaha ugu Fiican ee Kulliyadaha Yaryar ee Florida
Xarunta Dugsiyada Online: Kulliyadaha ugu sareeya ee la aqoonsan yahay ee loogu talagalay 2020
Darajooyinka Master-ka ee ugu Fiican: Top 25 Barnaamijyada khadka tooska ah ee MIS ee ugu Fiican 2018
Iskuulada ugu Fiican: 10ka Bachelor-ka ee ugu Fiican ee Barnaamijyada Kombiyuutarka
Iskuulada ugu Fiican: Darajooyinka ugu wanaagsan ee shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad ee 'Bachelor's Engineering Engineering'
Iskuulada ugu Fiican: Bachelor-ka ugu Fiican ee Barnaamijyada Injineeriyada Kombiyuutarka
Baro.org: Barnaamijyada Shahaadada Bachelor-ka ee Ugu Fiican ee Internet-ka
Jidka u xaadhaya haweenka goobaha farsamada meelkasta!
Dugsiga Fisher ee Teknolojiyada, waxaan aaminsanahay in ka mid noqoshada shaqsiyaadka oo dhan, oo ay ku jiraan dumarka iyo kuwa ka soo jeeda dadka aan la aqoon ee ku nool STEM, ay muhiim u tahay koritaanka iyo guusha sii socota ee barta IT.
U fiirso sidan, shirkadaha tikniyoolajiyadda mustaqbalka waxay raadinayaan fikrado cusub oo hal-abuur leh oo u shaqeeya qof walba. Iyadoo aan lagu biirin haweenka tiknoolajiyada xooga saaraya doorka hogaaminta, horumarinta alaabada aan isticmaalno maalin kasta way ka gaabinaysaa buuxinta baahiyaha haweenka isticmaala.
"Waxa dad badani fahmi waayaan in xisaabinta ay aasaas u tahay anshax kasta oo cilmiga, Teknolojiyadda, Injineerinka iyo Xisaabta (STEM)," ayuu yiri Lanham. Jaamacadda Hodges, Fisher School of Technology waxay bixisaa shahaadooyin ardayda ka caawiya inay horumariyaan xirfadaha loo baahan yahay si ay saameyn togan ugu yeeshaan qeybaha tikniyoolajiyadda ee ganacsigeenna.
Waxaa la muujiyey in gabdhuhu aysan kudayan xirfadaha teknoolojiyadda si lamid ah kuwa dhiggooda ah maxaa yeelay kama soo muuqdaan qalabka kombiyuutarka, softiweerka, iyo codeynta da'da yar ee ku filan inay ku sii wataan shahaadooyinka tiknoolajiyada macluumaadka kombiyuutarka. Halkii ay ku soo gali lahaayeen jawiga kulleejada iyagoo leh aqoon la mid ah dhiggooda, haweenku waxay dareemaan gadaal waxayna ku dambeeyaan inay ka tanaasulaan waxa u noqon kara wadiiqo xirfadeed heer sare.
Barnaamijyada Teknolojiyada Macluumaadka Kumbuyuutarka
Ku biir cilmiga sayniska ee teknolojiyadda macluumaadka kombiyuutarka
Our AS ee Teknolojiyada Macluumaadka Kumbuyuutarka waxay bixisaa aasaas adag oo ah heer-gelitaan heer-bilow ah oo ku saabsan barta IT-ga ama lagu ogaado aaggaaga shakhsiga ah ee diiradda la saarayo markaad u sii socoto shahaadada heerka Bachelor-ka.
Waxaa laga yaabaa inay u diyaariso ardayda leh baaxad weyn oo aqoon ah qaybaha hordhaca ee cilmiga tikniyoolajiyadda.
Waxaa laga yaabaa inay ardayda u diyaariso miiska caawinta ee heerka gelitaanka ama nooca taageerada jagooyinka IT-ga ee warshado kasta.
Barnaamijka Java Waxaan siiyaa faham muhiim ah oo ku saabsan barnaamijyada, taas oo laga yaabo inay ka faa'iideystaan ​​ardayda markay u socdaan meertada ay doorteen.
Koorsooyinka A + Hardware I iyo II waxaa ka mid ah marin u helka waxyaabaha loo yaqaan 'LabSim' ee loo habeeyay ardayda loo soo bandhigayo oo leh noocyo badan oo jilitaanno muuqaal ah oo laga yaabo in lagu dabaqo fasallada mustaqbalka iyo bey'adaha dhabta ah.
Ardaydu waxay doortaan goobta ay xiiseynayaan waxayna doortaan xulashooyin ku saleysan xulashooyinka takhasuskooda. Teknolojiyadaha Macluumaadka Kombiyuutarka Guud, Barnaamijyada iyo Koodh-siinta, ama cybersecurity iyo isku xidhka shaqada koorsada ayaa bixin kara aasaaska loo baahan yahay si loo sii wado shahaadada bachelor-ka ee doorashada.
Sida ku jirta CIT Sequence
Xirfadaha Gelitaanka-Heerka IT-ga
Bachelor of Science ee Teknolojiyada Macluumaadka Kumbuyuutarka
BS-kayaga Teknolojiyada Macluumaadka Kumbuyuutarka ayaa u oggolaaneysa ardayda inay astaysto darajooyinkooda iyadoo lagu saleynayo xirfadaha shaqsiyeed iyo xamaasadda IT-ga.
Koorsooyinka qoraalka Powershell ayaa laga yaabaa inay ardayda siiyaan fursad gaar ah oo ay ku helaan khibradda maareynta shabakadda dhabta ah ee adduunka ee lagama maarmaanka u ah abuurista iyo socodsiinta qoraallo dib loo isticmaali karo deegaanno kala duwan oo shabakad ah si loo dhammaystiro howlaha soo noqnoqda iyo kuwa adag ee ka dhex jira urur cabbir kasta ha lahaadee.
Ku kasbo shahaadooyinkaaga warshadeed iyo shahaadada isku mar. Shahaadooyinka warshadaha ee la heli karo waxaa ka mid ah MOS, CompTIA A +, CompTIA Net +, CCNA, MCP, CompTIA Security +, & CompTIA Linux +.
Xullo dariiqa Teknolojiyada Macluumaadka Kumbuyuutarka haddii aad raadineyso shahaado isku-dhafan oo la jaanqaadi kara noocyo kala duwan oo xirfado diiradda saaraya tikniyoolajiyadda nooc kasta oo urur ah.
Kala-doorashada waxay ardayda u oggolaaneysaa inay dhexgalaan nabadgelyada internetka, isku-xirnaanta, maareynta keydka macluumaadka, ama xirfadaha barnaamijyada softiweerka si ay u qaabeeyaan shahaado u habeynaysa waayo-aragnimada barashada si ay u taageerto yoolalka guud ee arday kasta.
Ardaydu waxay baran karaan sida loo jajabiyo dhibaatooyinka ganacsiga si loo go'aamiyo xalka IT-ga ee ku habboon, ka dibna loo abuuro wadiiqad macquul ah oo loogu talagalay geedi socodka hirgelinta ee buuxa, oo ay ku jiraan tababarka shaqaalaha iyo qorsheynta dayactirka socda.
BS ee taxanaha CIT
Xirfadaha Teknolojiyada Macluumaadka
Nabadgelyada iyo Barnaamijyada Darajada Isku-xidhka Shabakadaha
Bachelor of Science ee Amniga internetka iyo Xiriirinta
BS-kayaga ku jira Nabadgelyada iyo Isku-xirnaanta waxaa lagu gaarsiiyaa is-dhexgal, hannaan gacmeed (iyadoo la adeegsanayo aaladaha dhabta ah ee laga helo deegaanka shaqada) si looga faa'iideysto xalalka shabakadda, iyo ogaanshaha internetka iyo ka-hortagga laga yaabo inay ku siiso xirfado aad u baahan tahay laga bilaabo maalinta koowaad.
Ardayda waxaa loo soo bandhigayaa fursad ay ku bartaan sida looga faa'iideysto awooda PowerShell ee ku jirta jawiga Windows si ay uga faa'iideystaan ​​howlaha maamulka ee shabakada oo dhan iyadoo loo marayo nidaamka qoraalka.
Hodges U waxay siisaa mashiinno farsamo ardayda si ay u dejiyaan noocyo kala duwan oo qaabeynta shabakada jees jees ah ah si ay wax u qoraan, u tijaabiyaan una fuliyaan qoraallada PowerShell, kuwaas oo gacan ka geysan kara dhisida iyo turxaan bixinta xirfadahooda ka hor inta aysan soo gelin xoogsatada.
Baro xalka ugu hooseeya ee nabadgelyada internetka iyo arrimaha isku xirnaanta ee ka socda macalimiinta leh khibrad ku habboon gudaha. Dhageyso sida borofisarkaaga, oo ka shaqeeya hay'ad dowladeed, uu ku siinayo tusaalooyin cajiib ah, nolosha dhabta ah ee weerarada internetka wuxuuna sharxayaa kaliya sida weerarka loola dhacay, laakiin sidoo kale sida looga hortagi lahaa. Aqoontani waxay u tarjumaysaa tababar ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loo ogaan karo ugana gaashaaman karo urur ka weerara internetka, iyo sidoo kale sida loo abaabulo loona dhameystiro kala soocida ururada ka dib markii lagu guuleysto weerar lagu soo qaaday urur.
Ardaydu waxay ku ballaarin lahaayeen xirfadahooda amniga koorsadeena Anshax-jabinta Anshaxa. Ardaydu waxay dhex galaan jawi is dhexgal ah halkaas oo lagu tuso sida loo sawiro, loo tijaabiyo, loo jabsado, loona hubiyo nidaamyadooda. Jawiga degdegga ah ee shaybaarku wuxuu arday kasta ku diyaarinayaa aqoon qoto dheer iyo khibrad wax ku ool ah oo leh nidaamyada amniga ee muhiimka u ah hadda
Fasaladeenna IT-gu waxay ku shaqeeyaan shabakad madax-bannaan oo u oggolaanaysa ardayda inay adeegsadaan barnaamijyada jilitaanka ee isku-xirka, ogaanshaha amniga, iyo falanqaynta dhacdada. Fursadan jiliddu waxay ka caawin kartaa ardayda inay horumariyaan oo ay xoojiyaan nabadgelyada internetka iyo xirfadaha isku xirka iyaga oo u oggolaanaya inay tijaabiyaan imtixaanno isla markaana u ekeysiiyaan xaaladaha dhabta ah ee dunida, waqtiga-dhabta ah ee barashada oo dhammaystira hababka waxbaridda dhaqanka.
Ardaydu waxay fursad u heli doonaan inay abuuraan shabakado kaladuwan oo kumbuyuutar ah oo leh server iyo xarumo shaqo, waxay bartaan sida loogu shaqeeyo shabakad kasta oo cabbir leh si wax ku ool ah oo hufan, iyo inay bartaan sida loo ogaado, loo xalliyo, loogana hortago noocyada kala duwan ee halista amniga ee kheyraadka shabakadda isku xiran.
BS ee Nidaamka Nabadgalyada & Isku xirka Shabakada
Xirfadaha Dhismaha Shabakadda Kombuyuutarka
Barnaamijyada Shahaadada Horumarinta Barnaamijka (Coding and Computer Programming)
Bachelor of Science ee Horumarinta Software
BS-kayaga horumarinta Software-ka ayaa kuu diyaarin kara inaad naqshadeyso wax weyn. Haddii aad xiiseyneyso inaad abuurto softiweer, horumarinta websaydhka, ama adduunka ciyaaraha - waanu kaa soo daboolnay.
Barnaamijyada Java II waxaa laga yaabaa inay ardayda siiso tababarro is-dhexgal sare oo barnaamijyo ah. Ardaydu waxay ku kasban lahaayeen xirfado qorista koodh-koodh adag oo kombuyuutar ah oo kordhiya waqtiga fulinta iyo booska lagu kaydiyo ee barnaamijka softiweerku ugu baahan yahay inuu si habboon u fuliyo una shaqeeyo.
Waxaan daboolaynaa baaxad ballaaran oo arrimaha amniga ah oo inta badan laga helo barnaamijyada softiweerka waxaana laga yaabaa inaan u diyaarinno ardayda inay dhisaan koodh kooban, shaqadiisa aad u sarreeya, oo ammaan ah.
Ka faa'iideyso sida loo adeegsado xirfadaha aad baraneyso jawiga dhabta ah ee IT-ga ee ka socda macallimiinta ka shaqeeya warshadaha.
Ardayda raacda ciyaaraha, waxaan ku siineynaa Hordhac Barnaamijyada Ciyaaraha iyo Horumarinta Codsiga Moobaylka oo ay weheliso Barnaamijyada Codsiga Internetka iyo Macluumaadka.
Ardayda xiiseyneysa horumarinta softiweerka ku-saleysan websaydhka, waxaan ku siinnaa barnaaminta barnaamijyada Java, Barnaamijyada Fikradaha II, Naqshadeynta Webka Koowaad, Araajida Ururrada ee Warbaahinta Bulshada iyo Teknolojiyada Wadajirka ah, Ganacsiga elektarooniga ah, Horumarinta Codsiga Moobilka, iyo Barnaamijyada Barnaamijyada iyo Macluumaadka Internetka.
Ardaydu waxay fursad u leeyihiin inay bartaan luqadaha sireedka oo qayb ka ah barnaamijkooda shahaadada, iyada oo aan loo baahnayn xero boot. Hodges U waxay bixisaa koorsooyin Java, Python, XML / Java (app development), C ++, HTML, PHP, Visual Basic (VB), C #.
U adeegso xirfadaha sireed ee aad ka baratay mashaariicda sida sameynta barnaamijka Android, sameynta barnaamijyada softiweerka adoo adeegsanaya Java, ama sameynta ciyaar aasaasi ah oo lagu daro faylasha codka, khariidadaha lebiska, iyo taariikhda gadaal si aad u xoojiso khibradda guud ee cayaaraha.
Baro sida loo dheellitiro xirfadahaaga codeynta iyadoo lala kaashanayo abuurista khibrad guud oo isticmaale.
BS ee horumarinta Software-ka
Xirfadaha Horumarinta Software
Maxaa Dejinaya Hodges U Apart?
Haddii aad raadineyso inaad barato darajooyinka la xiriira kumbuyuutarka, waxaad u badan tahay inaad rabto inaad ogaato sababta ay tahay inaad u xaadirto Hodges U. Barnaamijyadeenna waxaa si gaar ah loogu talagalay inay kuugu diyaargaroobaan inaad ku soo gudbiso natiijooyinka mashaariicda adag, ee la xiriira IT-ga.
Koorsooyinka IT-ga ee laxiriira warshadaha oo loo sameeyay in lagu dhiso aqoonta aasaasiga ah iyadoo ardaydu ku sii socdaan dariiqooyinka shahaadada ay doorteen.
Barashada isdhexgalka ayaa udub dhexaad u ah mid kasta oo ka mid ah koorsooyinkayaga IT-ga. Hodges U waxay u qaadataa barashada firfircoon ilaa heer cusub iyadoo siineysa shaybaarro jilitaan ah, mashiinno macmal ah, iyo shabakado dalwad leh oo loogu talagalay ardayda inay ku tijaabiyaan xirfadahooda iyo aqoontooda ka hor inta aan la weydiinin inay ku qabtaan goobta shaqada.
Arday kasta waxaa loo soo bandhigayaa aasaasiga barnaamijyada iyadoo la adeegsanayo Java oo wuxuu baranayaa inuu adeegsado fikradaha barnaamijka si uu u dhammaystiro howlaha aasaasiga u ah horumarinta barnaamijyada. Ardaydu waxay fursad u helaan inay qoraan barnaamijyo fudud oo tusaale u ah isku xirnaanta ka shaqeynta barnaamijka softiweerka rakibidda shabakadaha iyo borotokoolka amniga.
Maareynta mashruuca waxaa lagu dhex daray barnaamij kasta oo shahaado IT ah si kor loogu qaado xirfadaha ka caawin doona ardayda inay maareeyaan mashaariic badan oo isku mar ah oo IT ah oo laga helo jawiga shaqada maanta.
Ardaydu waxay ku qaadan karaan imtixaannada shahaado-qaadashada ee 'Hodges U' qiime dhimis ardayga ah, ama iyagoo ah shahaado keli ah ama qayb ka mid ah shaqadooda koorsada. Markay qalin jabiyaan, ardaydu waxay sidoo kale heli karaan shahaadooyin takhasus gaar ah u dheer shahaadada diblooma.
Shahaadada Teknolojiyada Macluumaadka BS kasta waxay ku dhammaataa koorsada Nidaamka Falanqaynta & Xalalka Dhismaha. Koorsadani waxay ardayda siineysaa fursad ay ku soo bandhigaan fahamkooda ku saabsan sida loo beddelo shuruudaha ganacsiga iyada oo loo marayo dhammaan nidaamyada horumarinta nolosha wareegga si loo soo saaro qorshe dhammaystiran oo loogu talagalay hirgelinta nidaamka macluumaadka isku dhafan ee urur dhexdiisa ah, sidaas darteedna u siineysa caddeyn in ardaygu diyaar u yahay inuu qaato shaqo IT ah oo ka mid ah shaqadooda.